Ruinerwold Drenthe sy ny fianakaviany, ny fandidiana ara-tsaina manaraka (PsyOp) mankany amin'ny polisy bebe kokoa: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 16 Oktobra 2019	• 7 Comments
Tantara iray hafa toy izany izay mety niforitra mivantana avy amin'ny fantsom-peo nosoratan'i Peter R. de Vries. Fa izay ihany miaraka amin'ny tongony amin'ny sidina somary tery loatra Transavia, ka tsy misy ifandraisany amin'io. John de Mol studios sy Talpa koa dia tsy mahafehy, satria i John irery ihany no fangoraham-po tamin'io Linda falifaly io, ex tamin'ilay Willeke Alberti tena mamy ary rain'i Johnny mpikomy. Ny fiheverany fa manana ny ANP izy dia tsy misy ifandraisany amin'ny famoahana vaovao sandoka. Tsia, "marina" tokoa io tantara io! Farafaharatsiny, tsy maintsy mino izany ianao. Tsy maintsy mino izany ianao!
ny bartender henjana (mivantana avy amin'ny fampiofanana teatra?) izay mahita zazalahy lahy 25 very hevitra mikorontana; raim-pianakaviana izay tsy ray sy fianakaviana no nanafina ny fianakaviana nandritra ny 9 taona rehefa niafina tao ambadiky ny toeram-piompiana iray tany Ruinerwold i Anne Frank. Eny, eny, ary io tranga io dia mitovitovy amin'ity tranga ity avy tany Aotrisy taona vitsy lasa izay. ny raharaha Fritzl vaovao nitarika ny gazety Austrian. Tada! Ny fandidiana psikolojia manaraka (PsyOp)! Ahoana no anamboaran'izy ireo an'izany! Fa matoky; eto koa, ny Goebbels 'maxim dia hanao ny asany indray: Raha haverinao matetika ilay izy dia hino daholo ny rehetra.
Tsy mino izany mihitsy izahay! Tantara mahafinaritra izany. Ary mba hanomezana fitomboan'ny fahazoana antoka (satria ny gazety avy any awakin'i Belzika dia mamaky amin'ny fanehoan-kevitra eto ary efa tsikaritra fa tsy mino izany aho), voalaza fa ankehitriny ny ankizy sasany dia tsy voasoratra anarana amin'ny sivily toerana.
"Ny fikarakarana sy ny fiheverana voalohany dia mivoaka ho an'ireo izay ao an-trano. Ao amin'ny toerana azo antoka ny fianakaviana. Mila fitsaharana izy ireo. ”Nidera ny tompona kafe ny ben'ny tanàna fa tsy izany. Nahita tovolahy iray tao am-pisalany izy, nisafotofoto tanteraka ary nirehitra. "Raha misy mangataka fanampiana dia zava-dehibe ny hanomezana azy. Mendrika ny hoderaina ny tompona trano fisotroana ka nantsoina tamin'ny polisy. "
«Maromaro ny zaza tsy voasoratra tao anaty lisitra sivily. Maromaro ny isa », hoy ny Ben’ny tanàna raha tapitra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety. Nahoana ny ankizy voasoratra anarana dia tsy teo amin'ny radar an'ny tompon'andraikitra fanabeazana voatery, tsy afaka nilaza izy. "Tsy maintsy atsangana daholo ireo."
Fantatrao amin'izay! PsyOp io ary tsy misy ny fianakaviana. Hafatra fototra: "minia an-jambany izay lazainay sy ifandraisanay foana ny polisy ”, satria tan-pirenen'ny polisy isika, koa tsy maintsy mandeha ianao ary handeha any amin'ny polisy amin'ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa hahita sary sy sary video! John de Mol dia afaka mamokatra an'izany rehetra izany ho anao (jereo ho aiza izany) famokarana lalina miasa) ary Peter R. dia ao anaty fialan-tsasatra mendrika ho azy rehefa navela hanao izany. Tsy maintsy miverina haingana izy (miaraka amin'ny tongony mifatotra eo anelanelan'ny seza misy sidina Transavia loatra loatra) mba hanomezany ny heviny. Mazava ho azy fa tena liana tokoa izahay mahita hoe firy ny 'premium premium' Telegraaf no manjono amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny PsyOp manaraka.
Ho an'ny PsyOp tsara, dia manana ny famoronana tena ianao olana ilaina amin'ny fitsipika 'Olana, fanehoan-kevitra, vahaolana '. Amin'izany fotoana izany dia manandrana manosika ny lalàna izay tsy eken'ny vahoaka mihitsy. Noho izany dia mamorona olana misy fiantraikany lehibe amin'ny alàlan'ny famoaham-baovao sandoka ianao, ary avy eo, amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao sy ireo tompon'andraikitra momba ny fahatsapan-tena toa an'i Jeroen Pauw sy Matthijs van Nieuwkerk, hiteraka fahatezerana eo amin'ny vahoaka. Fanehoan-kevitra. Izany no ataonao amin'ny fampiasana ireo manampahaizana maro, vavolombelona vavolombelona sandoka sy mpanao politika (mpisehatra matihanina). Ny ben'ny tanàna sy ny mpanao politika dia amin'ny alàlan'ny famaritana natao an-tànana ho fianianan'ireo fiarahamonina fanta-daza. Tsy misy olana amin'izany, mba hanatsarana izany fihetseham-po izany. Avy eo dia efa masaka ny lalàna vaovao momba ny fanjakana vaovaon'ny polisy ary hitrandraka azy io ny vahoaka fa tsy miady, satria "Tsy ho avy intsony!" Peter R. manomboka izao amin'ny kilasy fandraharahana sy Jeroen sy Matthijs dia mbola mahazo tombony vitsivitsy mihoatra ny fitsipika Balkenende.
Inona no mety ho eo? vahaolana? Ahoana ny momba ny lalàna iray ahafahana mitsidika mpiasam-panjakana iray indray mandeha izay mijery ny misy trano iray. Tsara izany amin'ny asa an-danin'izany, satria mila tafika hafa manadihady miavaka isika (BOA) sy ireo olona miasa ho an'ny fanjakana, dia vitsy ny olona hitaraina amin'ny fananganana fanjakana polisy toa izany. Ao amin'ny fanjakana polisy dia te ho afaka ny hanafika trano ianao tsy misy sakana.
Antenaina fa tsy ho ela i John dia hampiasa ny tongony ankavanan'i Robert Jensen hisamborana ireo mpamaky an'i Martin Vrijland indray, satria i Vrijland dia manambara kely be dia be ary noho izany dia mila misintona an'ireo mpamaky izahay ho lasa mpiady mpiofana efa voaofana tsara. . Vakio eto ny lalao nilalao izany.
Lees eto ny lahatsoratra manaraka
Lisitry ny rohy loharano: telegraaf.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl
Tags: ANP, de, deepfakes, Featured, fanambakana, John, Mol, vaovao diso, hetsika, Peter, olana, ara-tsaina, psyop, R., fanehoan-kevitra, Ruinerwold, vahaolana, talpa, mandry
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 06: 53
Saingy tao amin'ny media sosialy ilay zanaka ... tsara ... azo itokisana
Zazalahy efa 25 taona - izay, araka ny anadahiny sy ny rahavaviny, dia nohidiana tao amin'ny toeram-piompiana toeram-piompiana iray any amoron-tsolon'i Ruinerwold - namoaka sary tato anatin'ny andro vitsivitsy izy raha nirenireny nanodidina ny vohitra. Tao amin'ny maizina, ohatra, naka sary ny anaran-tsoratry ny anaran'i Ruinerwold, fiangonana Reformed tao an-tanàna, ary nisy sarin'izy nipoitra tao amin'ny pub izay nahariana azy.
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 07: 20
Tokony hiasa amin'ny orinasa Creconat koa izy. Io orinasa io dia an'ny Native Creative Economy, orinasa iray hazo any Meppel izay nanafika ny alatsinainy ny polisy araka ny filazan'ny mpiara-monina iray. Izany orinasa izany dia eo amin'ny anaran'i B.
Tao amin'ny fampahalalam-baovao tao Ruinerwold, nangataka fanampiana tamin'ny farany ilay tovolahy, avy eo dia nanaitra ny polisy ny tompony. Nilaza i Jan fa tsy manana karapanondro ary tsy mbola nianatra. "Nijery kely izy dia nanolotra labiera," hoy i Jeffrey tao an-toerana tamin'ity gazety ity teo aloha.
[/ faran'ny teny]
Ahoana kosa ny amin'ireo antontan-taratasy ofisialy takiana rehetra tsy misy karatra? Inona ny toe-javatra misy amin'ireo manampahefana hetra sy ny sisa ... fa tsy azo atao raha tsy misy ID?
Rehetra tapaka nanoratra hoe:
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 07: 28
Raha vantany vao mahazo dinidinika ara-pihetseham-po avy amin'ireo mponina eo an-toerana ianao ora iray taorian'ny ora voalohany, dia fantatrao fa misy zavatra tsy mety. Raha toa ka nisy ny tena 'tena' vaovao izany, dia TSY misy ny fampahafantarana navoaka ho toy ny ampahany amin'ny fanadihadiana. Fa izao, 24 ora taty aoriana dia efa fantatsika ny tantaram-piainan'io lehilahy io.
Soa ihany fa mihamaro ny olona manodidina ahy mahatakatra izany.
Raha sendra latsaka anaty harona ireo hetsika psyops ireo dia manantena aho fa hampijalina mandra-pahafatiny ireo tompon'andraikitra. Tsy maintsy ho be izany.
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 08
Inona no nitranga tamin'io toeram-piompiana io? (no fehezanteny / fanontaniana miverimberina)
Inona no hitranga amin'i Mathijsje Nieuwkerk ao amin'ny caraany?
na any an-tranon'ny Ben'ny tanàna any Amsterdam? dia inona no hitranga?
Izany fanandramana izany dia efa nofehezin'ny tsirairay, ny fahitalavitra tena izy, ny tohin'ny "Big Brother"
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 51
Ny zavatra lehibe momba an'io tantara io dia ny hoe tsy mbola nisy tranga nitranga. Tsy nisy namono olona na zavatra hafa tamin'izany toetra izany.
Amin'izao fotoana izao dia toa tsy te hianatra afa-tsy ny fanabeazana an-tery izy ireo.
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 14: 15
dia mihevitra fa efa voasoratra ny volavolan-dalàna ary miandry ny fotoana marina hampidirana azy ny olona. Ny 'solontenan'ny vahoaka' ao The Hague dia mazava ho azy fa manaiky izany 😀
16 Oktobra 2019 ao amin'ny 19: 55
"Tsy mbola fantatsika", "Mbola eo am-pikarohana isika", "manana ekipa iray isika", "angamba dia fombafomba io, fa mbola tsy fantatsika na" "fa ho lasa mpikamban'ny Telegraaf misimisy kokoa avy amin'ny "mbola tsy fantatsika" ..
Salama .. ataontsika tsara ity PsyOp ..
« Extinction Rebellion sy ny antso ho an'ny hetra avo sy ny fifehezana tanteraka ny antsipirian'ny fiainanao
Fihetsiketsehana ho an'ny tantsaha: mandinika fa tsy mpiasam-panjakana ny mpitondra ataonao »
Total visits: 13.958.874